भैरवस्थानमा धार्मिक पर्यटन बढदै |
भैरवस्थानमा धार्मिक पर्यटन बढदै
बागलुङको बलेवामा रहेको भैरवस्थान मन्दिरमा धार्मिक पर्यटक बढ्न थालेका छन । बागलुङ नगरपालिका वडा नं. १२ मा रहेको भैरव मन्दिरको दर्शनका लागि दैनिक ३ सय दर्शनार्थी पुग्ने गरेका छन ।
दुई दर्जन हिमश्रृंखलाको दृश्यावलोकन पनि गर्न सकिने अग्लो ठाउँको मन्दिरमा पुग्दा मनको इच्छा पुग्ने धेरैको विश्वास रहेको छ । नियमित पूजा हुने मन्दिरमा साताका मंगलबार र शनिबार भक्तजनहरुको चाप बढदो हुन्छ ‘अहिले मंगलबार र शनिबारको दिनमा ३ हजार भन्दा बढि भक्तालुहरु आउँछन । पुजाका लागि लाम लागेर पालो पर्खन्छन मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर थापाले भने, ‘बडादसैं र चैतेदसैं लगायतमा अन्य सामान्य दिनभन्दा बढी भीड हुन्छ । बलेवामा रहेको विमानस्थनल संचालन सँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको मन्दिरमा दर्शनका लागि भिड लाग्ने गर्दछन । मन्दिरमा भित्र मूर्ति छोपिएको र गडेको अवस्थामा छ भने तामाको छाना छाइएको मन्दिरको छुट्टै ऐतिहासिक महत्व रहेको छ । कुनै काम विशेषको सफलताका लागि भैरवको भाकल गरेर पूजा गर्न जाने चलन रहेको अध्यक्ष थापाले बताए । धौलागिरी ४ जिल्ला लगायत कास्की, स्याङजा, गुल्मी, तनहुँ लगायतका स्थानबाट मन्दिर दर्शनका लागि भक्तालुहरु आउने गर्दछन ।
मन्दिरलाई बलेवा क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी गाउँको कोटको रूपमा समेत चिनिएको छ । उक्त मन्दिरमा दर्शनार्थि सँगैै आन्तरिक पर्यटक पुग्ने क्रम बढदो रहेको छ । नारायणस्थान, पैयुँपाटा, अमलाचौर, भकुन्डे, रायडाँडा, कुश्मीसेरा र दमेक लगायतका गाउँवासीले भैरवस्थानलाई परम्परागत कोटको रूपमा पनि मान्दै आएका छन । मौसमी समस्या र अन्य कामका लागि कोटको पूजा गर्ने चलन रहेको छ । भैरवको पूजा गर्दा आँटेको पुग्छ भन्ने विश्वासका साथ विभिन्न क्षेत्रबाट दर्शनार्थिहरु आउने गर्दछन विसं १७८९ मा चौबीसे राज्य अन्तर्गत मन्दिर रहेको क्षेत्र पर्वते राजाको नियन्त्रणमा रहेको किंवदन्ती रहेको अध्यक्ष थापाले बताए । मन्दिरमा तत्कालीन राजाहरूको भनिने पुराना खड्ग र त्रिशूल पनि रहेका छन ।
भैरवस्थान मन्दिरबाट बाट माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, धौलागिरि, निलगिरि लगायतका हिमाल श्रृंखला देख्न सकिन्छ । तिनै हिमशृङखला अवलोकनका लागि नजिकैको दुरीमा भ्युटावर पनि निर्माण गरिएको छ । भैरवस्थानबाट होमस्टे सञ्चालनमा आएको भकुन्डे नजिकै पर्छ । प्राकृतिक दृश्यावलोकन गरेर होमस्टेमा बस्ने चाहना भएका पर्यटक पनि भैरवस्थान पुग्ने गरेका थापाले बताए । मन्दिर व्यवस्थापन समितिले पनि पुनर्निर्माण मार्फत मन्दिरलाई आकर्षक बनाउने काम थालेको छ । हालै मन्दिरको व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले दानपेटीका राखिएको छ । मन्दिरलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनाउन गुरुयोजना मार्फत काम गरिएको अध्यक्ष थापाले बताए । थापाले १७ करोड रुपैयाँको गुरुयोजनामा राज्यको लगानी कम हुँदा काम प्रभावित भएको गुनासो पोखे ‘बजेट ज्यादै न्यून छ, पर्याप्त बजेट ल्याएर काम गर्न सके हजारौं पर्यटक लैजान सकिन्छ,’ थापाले भने, ‘लगानी अनुसारको प्रतिफल पनि उठाउन सकिने सम्भावना छ ।’ मन्दिर डाँडामा भएकाले खानेपानी आपूर्तिको भने समस्या छ । १७ करोडको गुरुयोजना रहेपनि अहिले सम्म मन्दिर व्यवस्थापनका लागि भनेर २ करोड ५० लाख मात्र उपलब्ध भएको समितिले जनाएको छ । वर्षामा सत्तलको पानी संकलन गरेर ट्यांकीमा जम्मा गरिएको छ । उक्त पानीलाई सरसफाइका लागि प्रयोग गरिँदै अध्यक्ष थापाले बताए ।
गुरुयोजना अनुसार मन्दिर, सत्तल, फूलबारी, आकर्षक गेट, पशुबलि व्यवस्थापन र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै ठाउँ बनाइनेछ । बागलुङ नगरपालिकाले भैरवस्थानसम्म पुग्ने मोटरबाटो मर्मतका लागि चालु वर्ष ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । गुरुयोजना पूरा गर्न समितिले पुरातत्त्व विभाग र पर्यटन बोर्डमा पनि सहयोग माग गरेको छ । बागलुङ सदरमुकाम देखी झण्डै १० किलोमिटरको दुरीमा रहेको उक्त मन्दिरमा पर्वतको कुश्मा देखी यान्त्रिक पुल तरेर करिब २ घण्टाको पैदल दुरीमा त्यहाँ पुग्ने सकिन्छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि बागलुङ र पर्वतका उद्योग वाणिज्य संघले पनि भैरवस्थानलाई केन्द्र मानेर विकास निर्माण र पर्यटकीय क्रियाकलाप थालेका छन । बलेवा विमानस्थल नियमित संचालन सँगै भैरव स्थानमा अझै पर्यटक बढने विश्वास लिईएको छ ।
बागलुङको कालिका मन्दिरमा श्रद्धालुको घुइँचो
मनकामना मन्दिर पुनःनिर्माणमा साढे १४ करोड खर्च
शिव मन्दिरमा नाग भेटिए पछि पुजा गर्नेको घुइचो
नयाँ वर्षसँगै गगन थापाले थाले सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी अभियान
नयाँ वर्षमा वाग्लुङका होटलमा भारी छुट
नेपालका निकै लोकप्रिय १९ धार्मिक स्थलहरु,के तपाई पुग्नु भएको छ ? जान्नुहोस ति धार्किक स्थल कहाँ कहाँ छन
आज श्रीपञ्चमी देशभर मनाइँदैछ
राष्ट्रपति मनकामना जाँदा दुई घण्टा रोकिए भक्तजन